Idlalwa njani iChord encinci kwiPiano okanye kwiKhibhodi
Ipiyano kunye nabadlali bebhodi yezitshixo kufuneka bazi ukuba bayakha njani imicu encinci. Njengeqhosha eliphambili, a chord encinci i-triad equlethwe yingcambu, ixesha lesithathu, kunye nekhefu lesihlanu. Ebhalwa njengophawu lwe-chord, amancinci amancinci afumana isimamva m, okanye ngamanye amaxesha imiz. Iingoma kumaqhosha amancinci zikunika amathuba amaninzi okudlala amancinci amancinci.
zihlala ixesha elingakanani izilonda esiswini
Musa ukukhohliswa ngegama elincinci. Ezi chords azikho zincinci okanye azibalulekanga kangako kunezixhobo ezinkulu. Zakhiwe nje kwizikali ezincinane, kunokuba zibe kwizikali ezikhulu.
Unokwenza i-chord encinci ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo:
Dlala inqaku leengcambu, kwaye udibanise inqaku lesithathu nelesihlanu lesikali esincinci ngaphezulu. Umzekelo, dlala u-A njengenqaku lengcambu, kwaye yongeza inqaku lesithathu (C) kunye nenqaku lesihlanu (E) lesikali esincinci.
Dlala umdlalo omkhulu kwaye unciphise inqaku eliphakathi, okanye ixesha lesithathu, ngenqanaba elinye. Umzekelo, i-chord enkulu inamanqaku e-CEG. Ukudlala i-chord chord, ukunciphisa i-E ukuya ku-E.
Jonga ezi chord zincinci. Zidlale ukuze zive ukuba zivakala njani.
Njengokudlala ii-chords ezinkulu, sebenzisa iminwe 1, 3, kunye no-5 kwizinto ezincinci. Ukuhamba kwesandla sasekhohlo esincinci, dlala inqaku leengcambu nge-LH 5; kwizandla zokunene, dlala inqaku leengcambu ngeRH 1.
Zama ukudlala Ngamanye amaxesha ndiziva ngathi ndingumama ongenamama, ingoma kwisitshixo esincinci esinamaqela amancinci amancinci.
amayeza jonga ipilisi
Ipilisi emhlophe eyi-m366
Zisebenza njani iimvavanyo zokuchama iziyobisi
ikhompyutha ivala iifestile ezili-10
igesi x yeentsana
nystatin umgubo usulelo igwele